Fernando Suárez Reguera sy ireo sary sokitra manokana | Famoronana an-tserasera
Ireo sary sokitra mahatalanjon'i Fernando Suárez Reguera
Vao haingana izahay no nitsidika inona ny peta-kofehy mamerina mamorona biby isan-karazany, ary mandalo ny asan'i Fernando Suárez Reguera, izay azonao atao mitadiava tarehimarika biby sy olombelona, natolotra ho tonga lafatra ny fanendrena hanaraka io lalana navela teo aloha io.
Suárez mamerina antsika ny fahalehibiazana amin'ireo biby tandindona toy ny elefanta ary mamela antsika hamerina ny tenantsika amin'ny endrik'olombelona amin'ny endrika tena kanto. Ny fanangonana ireo sary sokitra namboarina tamin'ny fomba manokana tamin'ny vy sy vy vy dia mendri-kaja fotsiny.
Toy ny hoe olo-malaza izy ireo noforonina tamin'ny fomba tsy nahy Amin'izany fikarohana izany dia ahitanao ireo tady manenjana izay mamorona sofina lehibe an'ny elefanta na ireo manify mba hitondra antsika ao anaty firafitra amin'ireo tasy goavambe.
Un Mpanakanto Oviedo monina any Madrid ary nasehony nanerana an'izao tontolo izao izany fijerena manokana ny sary sokitra izany. Sary vitsivitsy izay soloiny amin'ny vy, vy vy ary ny sasany misy resina. Miaraka amin'ny fitsaboana tsara indrindra hanehoana ny halehiben'ny zavamananaina sasany, na dia mampiasa vy aza izy ho toy ny endriny fitenenana.
Tsara lazaina, ary manaraka ny lalana navelan'ny sasany mpanakanto hita tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, ny horita na ny voromahery dia sary sokitra namboarina manokana. Mpanakanto manana portfolio lehibe arak'izay ahitanao ny tranokalany sy ny toerana hahitanao ny karazana asa vy rehetra. Mpahay sary sokitra amin'ny plastika amin'ny kanto ary manakaiky ny asany ny famoronana rafitra tsy dia misy toa ny hafa toy ny "tetezana biolojika" izay misy ny tetezana miorim-paka tsara toy ny hoe faka amin'ny hazo izy ireo.
Ianao dia manana eto ny tranonkalanao hahita anao ary araho ny fampirantiany rehetra ary asa avy ny instagram o ny facebook-nao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo sary sokitra mahatalanjon'i Fernando Suárez Reguera
Mampiasa zava-mahadomelina 20 ny mpanakanto iray ary mamorona sangan'asa 20 hanehoana ny vokany
Kanton'i Chloe Giordano amin'ny peta-kofehy